Accueil > Gazetin'ny nosy > Filoha Hery: Miantso vonjy amin’ny masoivoho vahiny
Filoha Hery: Miantso vonjy amin’ny masoivoho vahiny
Mihasarotra ny raharaha eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Mihazakazaka ny raharaham-pirenena eo ankatoka ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ho avy io. May volon-tratra ny mpitondra fanjakana tarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina. Mikasa ny hanodinkodina ny saim-bahoaka amin’ny fitaka sy ny halatra isan-karazany izay handresena amin’ny fomba maloto amin’ny taona 2018 ny fanjakana ankehitriny. Ny fiombonam-ben’ny eveka dia namaky batsilana ny lainga sy ny kolikoly avo lenta ataon’ny fanjakana ary ny fitaka nentin’ity fanjakana ity hangalarana sy handrobana ny firenena ary ny hivarotana izany amin’ny fomba ankolaka.
Tsy mijanona eo amin’ny resaka samy Malagasy intsony ny raharaha pôlitika anatiny eto Madagasikara ankehitriny fa lasa raharaha iraisam-pirenena tokoa amin’izao fotoana izao. Niaraha-nahita ny fanambarana nataon’ny parlemantera erôpeanina nivory tamin’ny alakamisy faha 16 novambra 2018 lasa tao Strasbourg teo mahakasika ny loza mitatao noho ny korontana mety hitranga eto amin’ny firenena amin’ny taona 2018 hoavy io. Izany dia noho ny raharaha pôlitika izay mahakasika ny fifidianana, ny kolikoly, ny tsy fanajana ny demôkrasia , ny fahalalahan’ny mpanao gazety ary ny raharaha Razaimamonjy Claudine sy ny fitsarana ary ny fanjakana izay ametrahan’ity parlemantera erôpeanina fanontaniana amin’ny fanjakana Malagasy tarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina ankehitriny.
Nampiantso an’ireo masoivoho vahiny monina eto Madagasikara teny amin’ny lapam-panjakana teny Iavoloha ny tolakandron’ny zoma faha 17 novambra 2017 ny filohampirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly. Inoana fa isan’ny zava-dehibe nodinihana tamin’izany ny fanambarana nataon’ny parlemantera erôpeanina sy ny fifidianana izay hatao eto Madagasikara amin’ny taona 2018.
Sahiran-tsaina tokoa ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina ankehitriny satria maro ny tetika ratsy heverin’izy ireo ho tanterahana hiverenana indray hitondrana ny firenena nefa maro ihany koa ny fanehoan-kevitra manitsy azy tsy hiditra amin’izany na avy eto an-toerana na avy any ivelany.
Ny alahady faha 19 novambra 2017 lasa teo dia nanao filan-kevitra ny ministra teny amin’ny lapam-panjakana teny Iavoloha ny fanjakana na dia tsy fotoana fanaovana izany io andro io ary indrindra noho ny maha alahady ny andro. Fantatra tamin’izany fa mahakasika ny fanovana ny Lalàmpanorenana, ny lalàm-pifidianana, ary ny fifidianana amin’ny taona 2018 no anton’izany. Mandeha ny resaka aty ivelany fa mbola te hanova ny Lalàmpanorenana ihany ny fanjakana mba hisakanana ny kandida tsy tiana hilatsaka. Misy koa ny tetika ny hanaovana fifidianana ny depiote alohan’ny fifidianana ny filohan’ny repoblika.
Tsy nijanona teo ny fihaonana amin’ny mpamatsy vola sy ny masoivoho vahiny miasa eto Madagasikara fa mbola nitohy omaly alatsinainy faha 20 novambra 2017 teny Mahazoarivo koa izany ka ny praiminisitra Solonandrasana Olivier izany. Mbola mahakasika ireo raharaha ireo ihany no niadian-kevitra tamin’izany.
Fantatra koa fa hamory ny filohan’antoko pôlitika eto Madagasikara koa ingahy Praiminisitra atsy ho atsy. Mazava ho azy fa hisaka lela ireo olona ireo no hatao amin’izany.
Mazava ny raharaha ankehitriny fa miantso vonjy amin’ny vondrona iraisam-pirenena ny fanajakana Hery Rajaonarimampianina ankehitriny mba hanaiky ny fitaka sy ny kolikoly ary ny teti-dratsiny amin’ny hanatanterahana fifidianana feno hosoka sy hisian’ny krizy vaovao indray izay hampifandrafy ny samy Malagasy.
Manaporofo ny hisian’ny halatra hataon’ny fanjakana eto Madagasikara amin’ny fifidianana amin’ny taona 2018 izao ny fitanan’ny praiminisitra ny primatiora sy ny ministeran’ny Atitany miaraka io. Ho hitantsika miandalana hatrany ny tohin’ity raharaha ity satria miompana amin’izany ny toe-draharaha pôlitika manomboka izao.